म जितको मैदानबाट भन्छु देशलाई अझै ठुलो खुसीयाली दिन्छौ – YesKathmandu.com
म जितको मैदानबाट भन्छु देशलाई अझै ठुलो खुसीयाली दिन्छौ
बिहीबार ०६, फागुन २०७२
२३ बर्षपछि साग म्याम्पियन बनेपछि नेपाली फुटवल टोलीको देशमा भब्य स्वागत भएको छ । देश प्रवेश गरेदेखि खेलाडीहरुको जयजयकार भइरहेको छ । यस्तो बेला नेपाली फुटवल टोलीका क्याप्टेनका मनमा के कुरा खेलिरहेको होला ? क्याप्टेन विराज महर्जनसँग गरिएको कुराकानी ।
तपाईहरु साग फुटवल खेल्न जाँदा यति यति सफलता मिल्ला जस्तो लागेको थियो ?
कुनै पनि खेल राम्रो खेल्ने हो, जितका लागि मात्र खेलिदैन । तर साग जस्तो खेल देशका लागि जित्नै पर्ने हो । हामी यहाँबाट जाँदा राम्रो खेल्छौ भन्ने लागेको थियो तर उपाधि नै जित्छौ भन्ने लागेको थिएन ।
उपाधि जितेर फर्किदा यति धेरै स्वागत र माया पाउँछौ भन्ने लागेको थियो ?
यति सारै माया पाउँछौ भन्ने त हामीलाई लागेको थिएन । फुटवललाई नेपाली दर्शकले धेरै माया गर्नुुहुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ, तर यसपटक अनुभुति गरयौ । देशबासीको मायाले हामीलाई सरपाइज बनाएको छ । हामी धेरै खुसी छौ ।
२३ बर्षपछि नेपाली फुटवलले यति ठुलो उपलब्धी हात पारेको छ, भावी दिनमा तपाईहरुलाई कस्तो प्रेरणा दिन्छ ?
यसले हामीलाई अपार हौसला दिएको छ । तर म सम्पूर्ण देशबासीलाई के भन्न चाहान्छु भने हामी देशका लागि खेल्छौ, यो भन्दा ठुलो जित र उपलब्धी गरेर हामी देखाउँछौ । देखाउने उत्साह हामीमा जागेको छ । भविश्यमा हामी यो भन्दा राम्रो गरेर देखाउने हामी सवैमा उत्साह जागेको छ ।
उपाधीले प्रेरणा त दियो, यो भन्दा ठुला उपलब्धी हाँसिल गर्न अरु चाहिँदैन र ?
नेपाली फुटवलमा विश्वस्तरमा पुरयाउन हालको उपाधीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि एउटाले मात्र हैन सवैले सामान पहल गर्नु पर्दछ । सरकार, नेपाली जनता, फुटवल प्रेमी सवैले सहयोग गर्नु पर्दछ ।
कस्तो खाल्को सहयोग भन्न खोज्नु भएको हो ?
सवैभन्दा पहिले हामीलाई तालिकको राम्रो ब्यवस्था हुनु परयो । त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नु परयो । त्यसपछि खेलाडीको खानपिनको ब्यवस्था गरिदिनु परयो । एउटा खेलाडीलाई चाहिने आधारभुत सवै कुरा उपलब्ध गराउनु परयो । खेल यो भन्दा राम्रो बनाउने बातावरण दिनु परयो ।
साग च्याम्पियन बन्नु भएको छ, अब त कति कुरा तपाईहरुले पनि माग्नु परयो नी ?
हामीले माग गर्दैमा सवै कुरा कहाँ हुन्छ र ? खेलाडीका लागि आवश्यक कुरा सवै पक्षले ध्यान दिनु परयो । एक पक्षले मात्र ध्यान दिएर हुँदैन ।
शक्तिशाली राष्ट भारतबिरुद्ध जित हाँसिल गर्दा तपाई क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो ? कस्तो अनुभुति भयो ?
म र मेरो टीमलाई यति खुसी भयो की म अहिले बयान गर्न सक्ँिदन । हामी र प्रशिक्षक मात्र नभई खेल हेर्न पुगेका दर्शक पनि धेरै खुसी भए । हाम्रो देश नेपाल दुखी छ यति बेला तर मैदानमा हामीले धेरै खुसी भयौ । त्यही जितको मैदानबाट सवै खेल, प्रेमी र देशबासीलाई खुसी दिन सकेकोमा हामी झन खुसी छौ ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं सभापतिमा सबुज बानियाँ निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कांग्रेस नेता खड्का देखि एमाओवादी नेता महारासम्म
Hello, i think that i saw you visited my site so i came to Гўв‚¬Е“return the favorГўв‚¬Вќ.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
stosowanie alveo says:
जेपी गुप्ताले भने ‘गच्छदार माओवादीको पुच्छर भए’
भूकम्प पीडित अशोकलाई आर्थिक सहयोग
अफगानस्थानबाट नेपाललाई १९१ रनको विजय लक्ष्य
वीरगन्जमा मेयरको टिकटमा कुरो नमिलेपछि राजपा कार्यकर्ताबीच कुटाकुट
५ दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री असार ५ मा चीन जाँदै
थाइल्याड सामु नेपालको बिशाल स्कोर, २८२ रनको दियो लक्ष्य